News Archives - Page3of 113 - Baganthar
The Project K group says, they will try to fit in with its parenting space
Bagan Thar Oct 20
The State Counselor, Aung San Suu Kyi, said that the project k would be well-deserved by the mother-in-law, who asked her to attendatraining program in South Korea with President Monson inaseparate ...
Bagan Thar Oct 18
The Ministry of Public Health’s Deputy Director of Public Health Dr Aung Kyaw Moe said today that the Japanese measles vaccine has been distributed in communities / villages since November 11. Aung Kyaw Moe, deputy ...
The tiger businessman gaveacompensation of 300,000, which was rejected by the family
According to the Myanmar Human Rights Commission, the tiger businessman has refused to pay his 300-year-old student, Maung Myat Thun Tun, from Dagon University to pay 300,000 compensation. According toareport by the Burmese ...
In Rangoon, people are turning their backs on the theft of land in Rangoon. Yangon, Hlegu Township Thousands of paddy land illegally seized in Hmawbi and Tai Gyi Townships And from the road near Wakay ...
မန္တလေးမြို့တွင် အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း စာများပါသည့် စာရွက်များ လမ်း​ပေါ်ကြဲချမှုဖြစ်ပွား
မန္တလေးမြို့တွင် အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း စာများပါသည့် စာရွက်များ လမ်း​ပေါ်ကြဲချမှုဖြစ်ပွား… အောက်တိုဘာ ၈ မန္တလေးမြို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဘက်စုံဖိနှိတ်ချုပ်ချယ်မှု လွတ်မြောက်ရေး ပြည်သူ့တပ်မတော် အမည်ဖြင့် အစိုးရ အလိုမရှိကြောင်း စာများပါသည့် စာရွက်များကို အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ က တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရေးသားထားသည်များမှာ အပြောနဲ့ အလုပ် ထပ်တူမကျ ကတိမတည်သည့် အစိုးရ အလိုမရှိ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု မကျွမ်းကျင်သူများအား နေရာပေးသည့် အစိုးရ အလိုမရှိ၊ ...
ကိုယ့်ကားကိုယ်စီး၍ အစိုးရ အလုပ်လာလုပ်နေရခြင်းမှာ သဘာဝမကျဟု မြို့တော်ဝန်ပြော
ရန်ကုန်စည်ပင်ကော်မတီဝင်၊ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အပါအဝင် ရန်ကုန်စည်ပင်တွင် လိုအပ်သည့် မော်တော်ယာဉ်များ အစိုးရ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် ဝယ်ယူမည့် အစီအစဉ်ကို ဝေဖန်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ့်ကားကိုယ်စီးပြီး အစိုးရဝန်ထမ်း လာ လုပ်နေရခြင်းမှာ သဘာဝမကျဟု ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက တုံ့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန်က “ကိုယ့်ကားကိုယ် စီးပြီး အစိုးရ အလုပ်ကို လာလုပ်နေသလိုဖြစ်တာ သိပ်သဘာဝ မကျဘူး။ သူ့ဝန် ထမ်းနဲ့ သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ...
မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး ဒေသအများစု မိုးကြီးနိုင်ပြီး မိုးကြိုးနှင့် လေပြင်း ကျရောက်နိုင်
မိုးလွန်ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအများအပြား တွင် နေရာကွက် မိုးကောင်းနေ ကာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝက် လက်မြို့တွင် မိုးကြိုးထိမှန်၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံးပြီး သုံးဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလဆန်းက စတင်သော မိုးလွန်ကာလတွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဖြစ်ခြင်းနှင့် လေထုမငြိမ်မသက် ဖြစ်စဉ်ကြောင့် နေရာကွက် မိုးကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ရှင်းပြသည်။ ‘‘လက်ရှိကာလဟာ မိုးရာသီမှ ဆောင်းရာသီသို့ ကူးပြောင်းနေသော မိုးလွန်ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။အနောက်တောင် မုတ်သုံလေက တောင်ဘက်ကို ...
အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ မူးယစ်အမှုတွဲဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရ
အလွမ်းအဆွေး သီချင်းများနဲ့ လူငယ်တွေအကြား ရေပန်းစား ကျော်ကြားနေတဲ့ လူငယ်တေးသံရှင်တဦးလည်းဖြစ်၊ ဆရာဝန်တဦးလည်း ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံတယောက် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မူရင်း သတင်း အပြည့်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်- အောက်တိုဘာ၇။ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံကို ယနေ့ညနေ၆နာရီခန့်က မြန်မာပလာဇာတွင် မှုးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံ ထားရကြောင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးမှ အတည်ပြု ပြောကြားကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိပါသည်။ ခင်ရတီ ယခုခေတ်လို မူးယစ်ဆေးဝါးများ ...